VaMugabe Vanokurudzira Zvakare Runyararo Munyika
Nyamavhuvhu 08, 2011
Mutungamiri wenyika, VaRobert Mugabe, vakuridzira kuti munyika muve nerunyararo uye kuti nyika isiyane netsika yemhirizhonga.
Vachitaura pagungano rokurangarira zuva remagamba raitirwa pamarinda emagamba paNational Heroes Acre muHarare, VaMugabe vakuridzira mapato ezvematongerwo enyika, masangano akazvimirira, makanzuru pamwe nevemakereke kuti vashandidzane neveruzhinji mukukurudzira runyararo munyika.
VaMugabe, avo vataura kweawa imwe chete, vadzokorora nyaya imweyo vave kunopedza mashoko avo vachikurudzira kubatana kwevanhu pasina mhirizhonga vachiti nyika haisungirwi kupinda musarudzo paine kurwisana.
Vati bato ravo riri kushunguridzika zvikuru nekunonoka kuri kuita gadziriro dzesarudzo.
Vatiwo vachaita musangano nedzimwe nhengo dziri muhurumende yemubatanidzwa panyaya iyi.
Vaendererawo mberi vachirumbidza basa riri kuitwa nemauto emunyika vakati kurudziro yokuti mashandiro emauto agadziriswe pasi peSecurity Sector Reform, haisi kuzotambirwa.
VaMugabe vashoropodza nyika dzekumavirira kunyanya Britain neAmerica nokutemera Zimbabwe zvirango zvoupfumi. Vati vaneta kugara vachikumbira kuti zvirango izvi zvibviswe asi nyika idzi dzisiri kuteerera. Vati nekudaro vanogona kudzitorera matano okutsivawo.
Mashoko aVaMugabe aya anouya apo SADC iri kugadzirira kuita musangano wayo uchazeya nyaya yeZimbabwe kuAngola mwedzi uno.
Chirongwa ichi chapindwawo nemutevedzeri wemutungamiri wehurumende, VaArthur Mutambara, asi mutungamiri wehurumende, VaMorgan Tsvangirai nemamwe makurukota emubato ravo, havana kupinda sezvo vanga vachiviga VaEliphas Mukonoweshuro kuWarren Hills. Vatungamiri vemauto eSouth Africa neMozambique vapindawo mugungano iri.
Zvichakadaro, dzimwe nyanzvi mune zvematongerwo enyika dzinoti mashoko aVaMugabe ekuti vanhu vanofanirwa kusiyana nemhirizhonga, kuitira kuti munyika mugoitwa sarudzo murunyararo, mashoko akanaka zvikuru.
Nyanzvi idzi dzinoti mashoko akadai anofanirwa kuudzwa nhengo dzebato raVaMugabe reZanu PF, idzo dzinogara dzakapomerwa mhosva yekukonzera mhirizhonga.
Muzvinafundo uye vari mudzidzisi paUniversity of Zimbabwe, VaJohn Makumbe, vati nyaya yekushandurwa kwemashandiro emapoka anochengetedza runyararo ingangonetsa sezvo VaMugabe nemutungamiri wehurumende, VaMorgan Tsvangirai, vasiri kuwirirana.
Nyaya ina Mark Peter Nthambe